Ukuvavanywa kokusebenza okuphezulu kakhulu kwindibano ye-pcb china-Kingford
Inkonzo yokulungisa iwaranti
Metal PCB wokuvavanya ulwazi
IDIP wokuvavanya ulwazi
Izixhobo zeNdibano yePCB
ILebhu yovavanyo lwePCB
Wenza for PCB elide
Umsebenzi kunye noMbono
Isivumelwano somgaqo-nkqubo wabucala
IKingfordibonelela ngoVavanyo oluSebenzayo (FCT) ngeenkonzo zalo zendibano zokujika-isitshixo. Uvavanyo olusebenzayo luhlala lusenziwa emva kokubaIibhodi zeseketheZihlanganisiwe kwaye i-AOI kunye nokuhlolwa okubonakalayo kugqityiwe. Uvavanyo lwakwangoko lusivumela ukuba sifumane kwaye silungise ukungaphumeleli kwecandelo, ukusilela kwendibano okanye imicimbi enokubakho yoyilo kwinqanaba lokuqala kwaye senze ukusombulula iingxaki ngokukhawuleza. Okokugqibela, abathengi banokuhambisa imveliso egqibeleleyo kubathengi babo ngexesha elifutshane. Uvavanyo olusebenzayo lwenziwa ikakhulu ukunqanda imicimbi yendibano kubandakanya iibhulukhwe ezimfutshane, ukuvula, ukungabikho kwezinto okanye ukufakelwa kweendawo ezingalunganga.
Uvavanyo olusebenzayo lwenziwa luvavanye isoftware, ehlala ibizwa ngokuba yi-firmware, kunye nezixhobo zokuvavanya ezinjengee-multimeter zedijithali, igalelo / iiPCB zokukhupha, unxibelelwanoamazibuko, uvavanyo lwejig njalo njalo. Uvavanyo oluSebenzayo olusekwe kwikhompyuter olusebenzayo (i-FCT) lwenziwa ngabasebenza kumgca wokudibanisa abasebenzisaukuvavanya isoftware Unxibelelwano nezixhobo zangaphandle zokujonga izixhobo eziphantsi kovavanyo.
Uvavanyo lwe-PCBA FCT ikakhulu luvavanya ezi zinto zilandelayo:
1. Nokuba amandla ombane kunye nezinto zangoku ziyahlangabezana neemfuno zoyilo
2. Emva kokwenza i-MCU inkqubo, ukufaka izinto zomsebenzisi kunye nokujonga ukuba iziphumo ziqhelekile na
3.Uvavanyo olupheleleyo lomsebenzi ekupheleni kwendibano yokujika
Ngemiyalelo yovavanyo kunye nefirmware, iKingford inokubonelela ngovavanyo lwe-100% FCT.
Lwedilesi: 3 Kumgangatho, A1 Building, Fuqiao Okwesithathu Industrial Zone, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China
Ifowuni: + 86-18929306972
Ifeksi: +86 (755) 23314590
Iifayile zeBOM kunye neGerber
Kwinkonzo yeNdibano sifuna ukuba umthengi abonelele ngeefayile zeBOM kunye nezeGerber, ezi ziyimfuneko ukuze kubonelelwe ngamaxabiso achanekileyo kunye nexabiso lendibano yePCB.Sicela usithumele njengesiqhoboshelo se-imeyile. uthengiso@kingfordpcb.com
I-Turnkey PCB kunye neqabane lakho lendibano e-China